Warar - Miyaad taqaanaa mootada stepper
Mashiinka Stepper waa qayb ka mid ah xakamaynta furfuran ee wareejinta calaamadaha garaaca wadnaha ee korantada u rogaya barakicin xagal ah ama baro toos ah. Marka laga hadlayo culeyska xad dhaafka ah, xawaaraha mootada, joogsiga booska kaliya waxay kuxirantahay inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo tirada garaaca wadnaha, mana saameynayo isbedelka culeyska, taas oo ah, in lagu daro astaamaha garaaca wadnaha ee mootada, mootada ayaa soo jeesan doonta tallaabo xagal Jiritaanka xiriirkan toosan, oo ay weheliso mootada mashiinka kaliya qalad xilliyeed ah iyo qalad is biirsaday oo aan jirin iyo wixii la mid ah. Waxay ka dhigeysaa mid aad u fudud in la isticmaalo mootada stepper si loo xakameeyo xawaaraha, booska iyo meelaha kale ee koontaroolka.
1.Stepper muuqaalada motor
<1> Xaglaha wareegga ayaa u dhiganta garaaca garabka, sidaas darteed shuruudaha xagasha sare ee saxda ah iyo meeleynta saxda ah ee sare waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo xakamaynta wareegga wareegga.
<2> bilow wanaagsan, joogso, jawaab togan iyo mid taban, xakameyn fudud.
<3> tillaabo kasta oo qaladka xagalku wuu yaryahay, mana jiro khalad isugeynaya.
<4> inta u dhexeysa xaddiga la kontaroolayo, xawaaraha wareegga ayaa u dhigma inta jeer ee garaaca wadnaha, sidaas darteed baaxadda gudbinta ayaa aad u ballaaran.
<5> nasashada, matoorka isteerinka wuxuu leeyahay culeys heersare ah oo sare si uu ugu ekaado booska joogsiga, iyadoo aan loo baahnayn in la isticmaalo bareega si uusan si xor ah u wareegin.
<6> wuxuu leeyahay RPM aad u sareeya.
Kalsoonida sare, dayactir la'aan, sicirka nidaamka oo dhan.
<8> fududahay in lumiyo talaabada xawaare sare
<9> waxay u egtahay inay soo saarto xaalad gariir ama muuqaal resonon ah oo ku soo noqnoqota goor gaar ah
2.Terminology ee matoorrada stepper
* Wajiga nambarka: logarithm-ka guntinta kicinta ee dhaliya aagag magnet kala duwan oo ulaha N iyo S. M ayaa badanaa la isticmaalaa.
* Tirada talaabooyinka: Tirada garaaca wadnaha ee loo baahan yahay si loo dhameystiro isbeddelka xilliyeed ee soojiidashada magnetic ama gobolka tabinta waxaa matalaya N, ama tirada burooyinka looga baahan yahay mootada inay ku wareejiso xagal ilkaha. Tusaale u soo qaad mashiinka afar-waji ah, waxaa jira qaab afar-waji ah oo afar-tallaabo lagu fulinayo, oo kala ah AB-BC-CD-DA-AB, afar waji oo sideed tallaabo ah, oo kala ah A-AB-B-BC- C-CD-D-DA-A.
* Xaglaha Tallaabada: oo u dhiganta calaamadda garaaca wadnaha, barokicinta xagasha ee rotor-ka mootada ayaa wakiil ka ah. = 360 darajo (tirada rotor ilkaha J * tirada talaabooyinka fulinta). Qaado matoor laba waji ah iyo afar waji oo caadi ah oo leh ilkaha rotor tusaale ahaan matoor 50-ilig ah. Fulinta afarta-tallaabo ah, tallaabada xagalku waa = 360 darajo /(50*4)=1.8 darajo (badanaa loo yaqaanno tallaabada oo dhan), halka siddeed tallaabo fulin ah, tallaabada xagalku waa = 360 darajo / (50 * 8) = 0.9 darajo (badanaa loo yaqaan nus talaabo).
* Meeleynta meertada: marka matoorku uusan firfircooneyn, qufulka qufulka ee rotor-ka laftiisa laftiisa (waxaa sababa iswaafajinta qaabka iligga qeybta birlabta iyo qaladaadka farsamada).
* Xuddunta Ma guurtada ah: daqiiqadda qufulka ee mashiinka mashiinka markii uusan mootada ku wareeginayn tallaabo koronto oo joogto ah. Xudduntaani waa halbeegga lagu cabbiro mugga (cabbirka joomatari) ee mootada oo ka madax bannaan danab wadista iyo korontada. In kasta oo xaddiga ma guurtada ah uu u dhigmo tirada tirade elektromagnetic-ka ee 'ampere-tanaasulka' oo uu la xiriiro farqiga hawada u dhexeeya qalabka rooga ee go'an, haddana laguma talin karo in si xad-dhaaf ah loo yareeyo farqiga hawada isla markaana la kordhiyo kacsanaanta ampere-ka si loo hagaajiyo istaagga Xuddunta, taas oo sababi doonta kuleylka iyo buuqa mashiinka.
Ac Stepper Motor, 220 Volt Ac Howlsocodsiinta Motor, Xidhan Loop Stepper Motor Driver, 6 Wire Stepper Motor, Howlsocodsiiyaha gawaarida gawaarida, Gawaarida Stepper Hybrid,